BYD Semiconductor ၏ ၈ လက်မ wafer စီမံကိန်း ကိုထုတ်လုပ် သည် - Pandaily
Feb 24, 2022, 13:15ညနေ 2022/02/24 14:01:45 Pandaily
တရုတ် မီဒီယာ တင်ပို့မှုIjiwei.comBYD ၏ ချစ်ပ် ထုတ်လုပ်မှု ဌာန BYD Semiconductor သည် ၈ လက်မ အရွယ် မော်တော်ယာဉ် စွမ်းအင် ချစ်ပ် စီမံကိန်းကို တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း Shandong ပြည်နယ်တွင် နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည် ၃၆၀, ၀၀၀ ထုတ်လုပ် ရန်စီစဉ် ထားကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဖော်ပြခဲ့သည်။
BYD Semiconductor Jinan ဌာနခွဲ ၏လက်ထောက် အထွေထွေမန်နေဂျာ Li Haitao က “ဒီ စီမံကိ န်းက စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် (NEVs) အတွက် စွမ်းအား မြင့် ချစ်ပ် ရှားပါး မှုကို သက်သာ အောင် ကူညီ လိမ့်မယ်။ ဒီနှစ် ဇန်နဝါရီလ မှာ စတင် ထုတ်လုပ် ခဲ့ပြီး လာမယ့် နှစ်မှာ အပြည့်အဝ ဒီဇိုင်း စွမ်းရည် ကိုရောက်ရှိ ဖို့ မျှော်လင့် ထားတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
BYD Semiconductor ၏အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာ power semiconductors, integrated circuits, smart sensors နှင့် optoelectronic semiconductors များ၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ BYD သည် ကုမ္ပဏီ၏ ၇၂. ၃% ကိုတိုက်ရိုက် ပိုင် ဆို င်ပြီး အစုရှယ်ယာ ပိုင်ရှင် ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင်BYD Semiconductor စာရင်း အစီအစဉ်A-share ဈေးကွက်တွင် ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များက အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် Ningbo, Guangdong, Changsha, Xi ‘an နှင့် Jinan တို့တွင် လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီ ၅ ခုရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:BYD သည် semiconductor ဌာန ပြင်ပ ရှိ ပေးသွင်း သူများထံမှ IGBT module များ ကိုစတင် ဝယ်ယူ ခဲ့သည်
Omdia မှ ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များအရ 2019 ခုနှစ်တွင် BYD ၏ motor drive controller များအတွက် insulated gate bipolar translator (IGBT) သည် စျေးကွက် ဝေစု ၁၈% ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ တွင်ပထမ နေရာတွင်ရှိသည်။ သို့ တိုင် BYD ၏ NEVs ရောင်းအား မြင့်တက် မှုကို ဖြည့်ဆည်း ရန် စွမ်းရည်သည် လုံလောက် သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် BYD NEV သည်ကား အစီးရေ ၅ ၉၃, ၇ ၄၅ စီး ရောင်းချ ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ တွင် ကား အစီးရေ ၁ ၈၉, ၇၀၀ ထက် ၂ ၃၁. ၆% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် BYD သည်၎င်း၏ NEV ရောင်းချ မှုသည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် ၁. ၅ သန်း အထိရောက်ရှိ လိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
တရုတ် လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ BYD နဲ့ ချီလီ Servicios y Operaciones Mineras del Norte တို့ကို လီ သီ ယမ် တူးဖော် ရေးအတွက် ကန်ဒေါ်လာ ၁၂၁ သန်း တန် ကန်ထရိုက် ၂ ခုကို ချီလီ က ပေးအပ် ခဲ့တယ်လို့ ချီလီ သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာနက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြောပါတယ်။